Adventure Visa Hindiya - Dooxooyinka aan la magacaabin ee Ladakh
Dooxooyinka aan la aqoon ee Ladakh
Inta u dhaxaysa buuraha Zanskar, gobolka Ladakh ee Hindiya, oo sidoo kale loo yaqaanno Mini Tibet ee dalka sababtuna tahay xiriir dhaqameed qoto dheer oo la leh caadooyinka Tibetian, waa dhul uu afku ka gaabsan karo isagoo marag ka ah quruxdiisa. Oo malaha 'ka duwan' waa kelmadda kaliya ee kuu hadhay markaad la kulanto dhinacan Hindiya.
Sababtoo ah joogga sare ayaa dhaafa iyada oo dhex marta buuraha madhalayska ah ayaa sidoo kale loo yaqaan lamadegaanka qabow ee Hindiya waxayna inta badan caan ku tahay dalxiisyada baaskiilka iyo safarada gobolka oo dhan.
Fiisaha Hindida ee Hindida (eVisa India)
Hindida Visa hadda waa laga heli karaa online sida ku cad Dowladda Hindiya siyaasadda fududaynta soo iibsiga fiisaha ee arrintan website. Waad heli kartaa Hindida Visa Online (eVisa India) adoo buuxinaya wixii khuseeya Foomka Codsiga Visa Hindida. Shuruudaha lagu helo Hindida Visa Online ama eVisa India waa inay lahaadaan aqoonsi emayl shaqeynaya, habka lacag bixinta sida kaarka deynta / kaarka deynta ama koontada Paypal iyo sidoo kale gelitaanka internetka. Kadib markaad buuxiso foomka dalabka oo aad lacag bixiso, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad emayl u dirto ama aad geliso nuqulka baarista baasaboorkaaga iyo sawir wejiga. Waxaad ka akhrisan kartaa maqaalkan Shuruudaha Visa Passport-ka Hindiya iyo Shuruudaha Visa ee Hindida Hindida ah.
Visa Hindiya ayaa diyaar u ah in ka badan 180 dhalasho oo ay ku jiraan kuwa ka yimid United States . Hindiya e-Visa (Visa-ka Hindida ee Hindiya) waa dhowr nooc iyadoo ku xiran ujeeddada safarka. Visa Caafimaadka Hindida, Ganacsiga Hindida Visa iyo Dalxiisayaasha Hindida Visa waa noocyada ugu badan ee eVisa Hindida oo ay soo saarto Dowladda Hindiya elektaroonig ahaan. Waxa eVisa ama Hindida Visa Online ka dhigan tahay adiga, Uma baahnid inaad booqato Safaaradda Hindiya, uma baahnid inaad baasaboorka soo qaadatid, uma baahnid inaad shaabad ku hesho baasaboorkaaga, uma baahnid inaad jir ahaan safka istaagto ama ku dir ama ku dheji dukumeenti kasta. Waad codsan kartaa Codsiga Visa Hindida kaas oo lagu dhammayn karo in ka yar 2-3 daqiiqo oo eVisa loogu soo diro Hindiya emayl ahaan. Waxaad booqan kartaa Gegida Diyaaradaha ama Maraakiibta ama diyaaraddii Charter -ka oo aad u safri kartaa safarkaaga Hindiya. Saraakiisha socdaalka ayaa ku hubin doona fiisahaaga kombiyuutarka waxayna u oggolaan doonaan gelitaanka Hindiya.
Markaad u safraysid Ladakh, waxay ahaan lahayd muuqaal caadi ah oo laga gudbo waddooyinka dhaadheer ee buuraha, inkastoo ay ka muuqdaan xaaladaha ugu adag laakiin si kastaba ha ahaatee waxay u muuqdaan kuwo qurux badan oo cajiib ah oo qurux badan oo dabiici ah.
Ladhakh, sida madhalayska ah ee ay ka muuqato dibedda, dhab ahaantii waxaa ka buuxa dooxooyin firfircoon oo ku yaal qalbigeeda, oo soo bandhigaya aragti wanaagsan oo ku saabsan dhaqanka isku dhafan ee Tibet iyo Ladakh.
Dooxada Zanskar waa mid ka mid ah dooxooyinka ugu quruxda badan gobolka oo ay ku hareereysan yihiin barafka ugu sarreeya Himalayas. Dooxooyinka kale ee caanka ah ee gobolka waxaa ka mid ah dooxada Nubra oo ku taal geeska waqooyi ee dalka oo xudduuddeeda la wadaagto Xinjiang ee Shiinaha. Dooxada Nubra wuxuu caan ku yahay safarada baaskiilka ee maraya baasaska ugu sarreeya ee Ladakh.
Calaamadee Talooyin loogu talagalay booqdayaasha ganacsiga ee Hindiya ku imanaya Visa Ganacsi.
Mid ka mid ah Goobaha Ramsar ee ugu sarreeya adduunka, harada Tso Moriri ama harada buurta oo ku taal joog ka badan 4000 mitir, oo ay ku hareeraysan yihiin dhul qoyan iyo deegaan ay ku nool yihiin shimbiraha tahriibka ah waa mid ka mid ah harooyinka ugu quruxda badan uguna sarreeya ee ku yaal Hindiya.
Haradu waxay hoos timaadaa Kaydadka Ilaalinta Qoyaanka ee Tso Moriri waana mid ka mid ah goobaha Ramsar ee liiska ku jira, oo ah calaamad u ah dhulalka qoyan ee muhiimadda caalamiga ah, ee dalka. In kasta oo aan la joogin karin in la dego agagaarka harada, haddana meeshu waxay bixisaa qurux rabbaani ah waxayna u dhaqantaa sidii jawharad buluug ah oo la socota buuraha mugdiga ah.
Ka hadalka harooyinka, muxuu noqon lahaa sawirka harooyinka sapphire ee gobolka ay ku daboolan yihiin buuro boodh ah oo qallalan? Xaqiiqdii waxay u ekaan doontaa wax aan ka yarayn jawharado yaryar oo ka ifaya dhul qalaad.
Harada Pangong Tso waa harada ugu caansan Ladakh, iyada oo booqashada qaybtan Hindiya ay tahay mid aan dhammaystirnayn iyada oo aan la arag jawharaddan buluugga ah. Harada waxay dhacdaa inay badasho midabada maalintii marar badan oo leh midabbo kala duwan oo buluug ah oo xitaa casaan leh oo leh biyo cad oo dhammaystiran. Si kasta oo ay u muuqato jirrabaadda, ha isku dayin inaad ku dabaalato heerkulka eber ee hoose ee harada! Muuqaalka laga soo qaatay Pangong Tso waa shay aan hubaal ahayn in meel kale lagu arki karo.
Xataa harooyinka la qaboojiyey ee Ladakh kama yara qurux kasta iyadoo socodku caan ku yahay xitaa bilaha jiilaalka. Sidoo kale mid ka mid ah dooxooyinka ugu caansan ee kaamamka gobolka waa dooxada Markha oo loo arko inay tahay mid ka mid ah dooxooyinka ugu fiican ee kaamamka.
Calaamadee U-qalmashada Visa Hindida.
Ku -simaha sida albaabka Siachen Glacier, the Khardung La pass waa kaarka matoorka ee ugu sareeya aduunka iyada oo wadadeedu u socoto dhinaca dooxada Nubra ee geesta kale. Xamaasadeyaasha xiisaha leh ee ka socda daafaha dalka ayaa u socdaalaya dhammaan bannaanka woqooyi ee Hindiya si ay ugu dambayn u gaaraan kaarka sare. Dhamaadka safarka waxaad yeelan doontaa safafka madhalayska ah ee Zanskar oo kugu soo dhawaynaya cirka sare ee Azure.
Waa maxay erayga La ku lifaaqan baas kasta oo Ladakh ah?
Ladakh waxaa kaloo loo yaqaan dhulka baasaska badan, oo leh erayga La oo afka maxaliga ah oo macnaheedu yahay buur way dhaaftaa. Inta badan buuraha Ladakh ee mara waxaa lagu dhejiyaa ereyga La. Markaa kani dhab ahaantii waa La land of India.
Mid ka mid ah baasaska aan lagu magacaabin La, wuxuu ku yaal meel la yiraahdo Magnetic Hill, oo ay ku hareereysan yihiin dhaadhacyo abuuraya dhalanteed indhaha ah, oo caan ku ah guryaha magnetic -ka. Markaa ha la yaabin marka xigta haddii aad aragto gaadhi taagan halkan oo ka hor imanaya xeerka cuf -cufnaanta sida ay u muuqato inuu ka jawaabayo baaqyada buuraha!
Calaamadee Fiisaha Hindida Degdegga ah or Degdeg Visa Hindi ah.
Dhaqanka Ladakh waxaa si weyn u saameeya Tibet mana aha wax la yaab leh in isku mid ay ka muuqato cuntada iyo ciidaha gobolkaan, oo sidoo kale loo tixgeliyo inay tahay xarunta Buddhism -ka dalka. Markaad ku safrayso gobolka oo dhan, booqashada macbudyada sare ee sare waa wax aan la seegin si kastaba ha ahaatee waxay soo bandhigayaan aragtida ugu dhow ee hab-nololeedkii dhaqanka ee Ladakh.
Nolosha dadka Ladakh waa hubaal inay aad uga duwan tahay meel kasta, iyada oo cunnooyinka fudud iyo hab -nololeedka lagu dhaqmo iyadoo la siinayo dhulkii adkaa.
Qaybta ugu qabow ee Hindiya iyo meesha labaad ee ugu qabow dhulka, Drass, oo ku yaal degmada Kargil ee Ladakh, waa mid ka mid ah meelaha ugu adag ee la deggan yahay iyadoo heerkulku hoos u dhacayo marka laga jaray 30 illaa 35 digrii. Marka la eego qabowga ba'an ee buuraha, cunnada Ladakhi waxaa inta badan ku hareereysan noocyo kala duwan oo baasto ah, maraq iyo miraha daruuriga ah ee gobolka sida shaciir iyo sarreen.
In kasta oo dalxiis ka dillaacay aagga ayaa horseeday inay ka soo baxaan xulashooyin cunto oo badan oo ka imanaya bannaanka woqooyi ee caanka ah ee Hindiya, laakiin markii loo safrayo dhulkan qarsoodiga ah, dhadhanka asalka ah ee Zanskar wuxuu soo bandhigi doonaa dhadhanno kala duwan oo Himalayas ah oo ka imanaya gobolkan sida muuqata qalalan. Hindiya.
Thukpa, maraq noodle ah oo ka yimid Tibet iyo shaaha subagga ayaa caan ku ah dukaamada maxalliga ah ee gobolka. Oo haddii aad dhacdo inaad booqato meesha inta lagu gudajiro xafladda sanadlaha ah ee keniisadda Hemis, oo ah mid ka mid ah ciidaha ugu dabbaaldegga badan ee Ladakh, markaa dhulka u muuqda mid aan muuqan wuxuu u muuqan doonaa midab ka midab badan intii aad goobjoog ka ahaan lahayd.
Hindisaha E-Dalxiiska Visa Visa